ỊNAKỌTA IHE NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Ịnakọta ihe na Photoshop
Mgbanwe dị iche iche na-emekarị na mmemme, faịlụ na usoro dum, na-akpata nkwụsị ụfọdụ data. Iji chebe onwe gị pụọ na ịnweta ozi dị mkpa, ịkwesịrị ịdebe mpaghara, nchekwa ma ọ bụ faịlụ achọrọ. Enwere ike ime nke a na ngwaọrụ ọkọlọtọ nke sistemụ arụmọrụ, mana mmemme pụrụ iche na-enye ọrụ ndị ọzọ, ya mere bụ ngwọta kacha mma. N'isiokwu a, anyị ahọrọla ndepụta nke ngwanrọ nchekwa dị mma.
Eziokwu Ezigbo Acronis
Akpa na ndepụta anyị bụ Acronis True Image. Usoro a na-enye ndị ọrụ ọtụtụ ngwaọrụ bara uru maka ịrụ ọrụ na ụdị faịlụ dị iche iche. N'ebe a, enwere ohere iji kpochapụ usoro ahụ site na mpempe akwụkwọ, ikpuchi diski, ịmepụta draịvụ nwere ike ịnweta na kọmputa site na ngwaọrụ mkpanaka.
Maka nkwado ndabere, software a na-enye ndabere nke kọmputa dum, faịlụ ọ bụla, nchekwa, disks na partitions. Zọpụta faịlụ na-enyefe na mpụga mpụga, USB flash drive na ihe nchekwa ọ bụla ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, ụdị zuru ezu na-enye gị ohere iwebata faịlụ na igwe ojii nke ndị mmepe.
Download Acronis Ezi Image
A kwadoro ọrụ ndabere na Backup4all site na iji ọkachamara ahụ wuru. Ọrụ dị otú ahụ ga-aba nnọọ uru maka ndị ọrụ na-enweghị ahụmahụ, n'ihi na ọ dịghị ihe ọmụma na nkà ndị ọzọ ga-achọ, naanị ịkwesịrị ịgbaso ntuziaka ma họrọ ọnụọgụ ndị dị mkpa.
Ihe omume ahụ nwere oge, na-edozi nke, ndabere ga-amalite ozugbo na oge setịpụrụ. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịdeghachi otu data ọtụtụ ugboro na oge etiti, mgbe ahụ hụ na iji oge ahụ ka ị ghara ịmalite usoro ahụ aka.
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịmepụta ngwa ngwa ma gbado ndabere nke faịlụ, nchekwa ma ọ bụ nkewa nke diski, mgbe ahụ ngwa ngwa APBackUp ga-enyere aka imezu nke a. Ihe mmemme niile n'ime ya ka onye ọrụ ahụ na-arụ ọrụ site n'enyemaka nke ọrụ a wuru na-agbakwunye ọkachamara. Ọ na-edozi ihe ndị a chọrọ, wee malite nkwado ndabere.
Na mgbakwunye, na APBackUp enwere ọtụtụ ntọala ndị ọzọ na-enye gị ohere igbanwe ọrụ ahụ n'otu n'otu maka onye ọrụ ọ bụla. N'ụzọ dị iche, m ga-achọ ịkọ nkwado nke nchekwa ebe mpụga. Ọ bụrụ na ị na-eji ya maka nkwado ndabere na mpaghara, wepụ obere oge ma dozie nke a na windo kwesịrị ekwesị. A ga-etinye aka na ọrụ ọ bụla.
Ụlọ ọrụ Paragon ruo n'oge na-adịbeghị anya na-arụ ọrụ na usoro Nkwado & Iweghachite. Otú ọ dị, ugbu a ọrụ ya agbasawo, ọ ga-ekwe omume ịrụ ọtụtụ arụmọrụ dị iche iche na disks, n'ihi ya, e kpebiri ịnyeghachi ya na Hard Disk Manager. Ngwaọrụ a na-enye ngwaọrụ niile dị mkpa maka ndabere, mgbake, nkwekọrịta na nkewa nke mpịakọta diski ike.
E nwere ọrụ ndị ọzọ na-enye gị ohere idezi akụkụ nke disk n'ọtụtụ ụzọ. A na-akwụ ụgwọ Paragon Hard Disk Manager, ma a na-enweta nnwale ikpe ikpe n'efu maka nbudata na ebe nrụọrụ weebụ ọrụ nke onye mmepụta.
ABC Backup Pro, dị ka ọtụtụ n'ime ndị nnọchianya nọ na ndepụta a, nwere ọkachamara na-arụ ọrụ ngo. Na ya, onye ọrụ ahụ na-agbakwụnye faịlụ, na-eme ka nchekwa na-arụ ọrụ ma na-arụ ọrụ ndị ọzọ. Lelee mma mara mma. Ọ na-enye gị ohere izochi ozi dị mkpa.
Na ABC Backup Pro, e nwere ngwá ọrụ na-enye gị ohere ịme ihe omume dịgasị iche tupu ịmalite na mgbe ị rụchara nhazi ahụ. Ọ na-egosikwa na ichere ka usoro ihe omume ahụ mechie ma ọ bụ na -eṅomi na oge a kapịrị ọnụ. Tụkwasị na nke a, na ngwanrọ a, a na-echekwa omume niile iji abanye faịlụ, ya mere i nwere ike ile ihe ndị ahụ anya.
Ndị na-ede akwụkwọ na-egosipụta
Onye na-ede ederede Reflect na-enye ikike ịdebe ndabere data, ma, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, iji weghachi ya na mberede. A chọrọ onye ọrụ naanị ka ịhọrọ nkewa, folda ma ọ bụ faịlụ ọ bụla, wee dee ebe nchekwa nchekwa, mezie ọnụọgụ ndị ọzọ ma malite usoro mmegbu ọrụ.
Usoro ihe omume ahụ na-enyekwa gị ohere ime ntaneti diski, gbanye nchebe nke ihe oyiyi disk site na nhazi site na iji ọrụ a wuru na-elele usoro faịlụ maka iguzosi ike n'ezi ihe na njehie. A na-ekesa onye na-ede Akwụkwọ na-akwụ ụgwọ maka ụgwọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara onwe gị na arụmọrụ nke software a, dị na nbudata ụdị nnwale n'efu ahụ site na saịtị ọrụ.
Ibudata onye edemede edere
Edobere EaseUS Todo Backup site n'aka ndị nnọchiteanya ndị ọzọ site n'eziokwu na usoro a na-enye gị ohere ịkwado usoro sistemụ niile na-enwe ike ịmalite mgbake, ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Enwekwara ngwá ọrụ nke ị nwere ike ịmepụta diski nnapụta nke na-enye gị ohere iweghachi ọnọdụ mbido nke usoro ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ọdịda ma ọ bụ nje virus.
Maka ndị ọzọ, Todo Backup fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ dị iche iche site na mmemme ndị ọzọ dị na ndepụta anyị. Ọ na-enye gị ohere iji akpaaka arụ ọrụ amalite oge, rụọ nkwado ndabere na ụzọ dịgasị iche iche, melite nkọwa zuru ezu, na ikpuchi akwa.
A na-arụ ọrụ ndabere na ọrụ Iperius Backup na-eji ọkachamara ahụ wuru ewu. Usoro nke ịgbakwunye ọrụ dị mfe, ọ bụ naanị onye ọrụ ka ịhọrọ ọnụọgụ ndị dị mkpa ma soro ntuziaka ahụ. A na-akwado onye nnọchiteanya a niile na ngwaọrụ na ọrụ dị mkpa iji rụọ ọrụ ndabere ma ọ bụ mepụta mgbake data.
Iche iche chọrọ ịtụle na-agbakwụnye ihe iji detuo. Ị nwere ike ịkọrita diski diski ike, nchekwa na faịlụ dị iche na otu ọrụ. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ọnọdụ maka izipu ozi ịntanetị. Ọ bụrụ na i megharịrị nhọrọ a, a ga-amara gị ọkwa maka ihe ụfọdụ, dịka ịmecha nkwado.
Download Iperius ndabere
Ndị ọkachamara nkwado ndabere
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe omume dị mfe, na-enweghị ihe mgbakwunye na ọrụ ndị ọzọ, na-eme ka ọ dị mma maka ime nkwado ndabere, anyị na-akwado ịṅa ntị na ọkachamara nkwado ndabere. Ọ na-enye gị ohere ịdị mma-gbakwunye ndabere, họrọ ogo nke ịchekwa ma megharịa oge.
N'ime ezughị okè, m ga-achọ ịhụ na enweghị asụsụ Russian ma kwụọ ụgwọ. Ụfọdụ ndị ọrụ adịghị njikere ịkwụ ụgwọ maka ọrụ ndị dị otú ahụ. Mmemme nke ihe omume ahụ na-arụ ọrụ ya n'ụzọ zuru oke, ọ dị mfe na nghọta. Edere ule ikpe ya maka nbudata n'efu na weebụsaịtị gọọmentị.
Download ọkachamara nkwado ndabere
N'isiokwu a anyị lere anya na ndepụta nke mmemme iji kwado faịlụ nke ụdị ọ bụla. Anyị gbalịrị ịhọrọ ndị nnọchianya kasị mma, n'ihi na ugbu a, e nwere ọtụtụ ngwanrọ maka ịrụ ọrụ na diski n'elu ahịa, ọ bụ ihe na-enweghị ike itinye ha niile n'otu isiokwu. E gosipụtara mmemme free na ndị akwụ ụgwọ ebe a, mana ha nwere nsụgharị ngosi nnwere onwe, anyị na-akwado nbudata ma gụọ ha tupu ịzụta ụdị zuru ezu.